Zimbabwe Luxury Vacations
> Zimbabwe Luxury Vacations
Zimbabwe Luxury Travel Guide
Paradise Sunset Dark by runfreefall
Amid a famous political and economic struggle, Zimbabwe remains one of Africa's southern jewels. Ultimate experiences will whisk you away to Victoria Falls, take a luxury safari into the wilderness teeming with abundant animals and visit the ruins of Great Zimbabwe. The discerning traveler who plans a trip to Zimbabwe will definitely be rewarded. Zimbabwe is home to hundreds of tropical wildlife, exciting adventures and gorgeous natural vistas.
Although Zimbabwe is often overshadowed by neighboring South Africa or Botswana, a luxury safari in Zimbabwe will be filled with thrills, excitement and spectacular views. Some of Zimbabwe's hotspots include the Eastern Highlands offering panoramic vistas to Mozambique, the expansive Lake Kariba, the fascinating rock formations at Matobo, the mystifying ruins of Great Zimbabwe and the ultimate adventures at Victoria Falls.
Zimbabwe, once the Breadbasket of Africa, is an incredible destination and a true adventure for the discerning traveler. Choose the road less traveled and book your next luxury vacation in Zimbabwe, it will make all the difference.
Zimbabwe local information
Language: English (official), Shona, Sindebele (the language of the Ndebele)